Ahoana no To Stay Safe rehefa nitondra fiara handeha Nandritra Winter | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana no To Stay Safe rehefa nitondra fiara handeha Nandritra Winter
Winter no fotoana tsara indrindra mba hanorenana firefodrefotry afo, soa aman-tsara namely ny tehezan-tendrombohitra, hanorina snowmen ary snuggle miaraka mahafinaritra dite. Indrisy, fa tsy ny rehetra Mahafinaritra sy lalao. Winter ihany koa ny mamorona ny sasany amin'ireo lalana mamitaka indrindra toe-javatra. Satria tsy azo atao ny ankamaroantsika mba hibernate mandra- lohataona, eto dia ny toro-hevitra mila ny fomba hijanona rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara nandritra ny ririnina.
Safe Fitondrana Fiara? Zavatra Ratsy ny Mandainga?
Mihevitra isika ho malina loatra nanome anareo toro-hevitra ny amin'ny fomba hijanona rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara nandritra ny Winter? Araka ny AAA, Winter oram-baratra, andro ratsy, ary misavoritaka lalana fepetra ireo toe-javatra eo amin'ny efa ho antsasaky ny iray tapitrisa no nianjera sy mihoatra noho ny 2,000 lalana maty isan-ririnina.
Entana Up Emergency, fitafiana ho an'ny Car Travel
Indraindray, ny fikasany hijanona rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara nandritra ny ririnina Tsy ampy. Tiantsika ny hiaina araka ny teny filamatra, 'Fanantenana ny tsara indrindra, hiomana ho amin'ny ratsy indrindra '. Ho azo antoka ny fiara dia tena nety amin'ny vatsy in raha misy zavatra maika. Asio mafana bodofotsy, akanjo mafana, voalohany pitsaboana vonjy maika, ny jiro na ny hipoaka ny fahatezeranao, jumper telegrama, ny ranomandry scraper, angady, fasika na Kitty fako mba hanome anao vahana, ary oram-panala gadra. Tokony ihany koa ny mitondra rano, sakafo-like angovo trano fisotroana na ny lalana Mix-ary ny telefaonina dovia!
Izany no mitondra fiara ny ririnina tendrony fa matihanina dia lavitra mpamily ampiasaina mba hamaritana raha toa ny toe-piainana lalana mamirifiry. Jereo ny any ivelany fitaratra,. Raha gilasy no manomboka ny endrika eo amin'ny fitaratra, izany no tsara mpanondro izay ranomandry ihany koa ny famoronana lalana. Makà fepetra fanampiny mba hijanona soa aman-tsara rehefa nitondra fiara handeha na miandry mandra-manafana ny hitondra.
Roahy Safe ka avelao tany am-boalohany!
Mety toa toy ny hita indray, fa fantatray ianao be atao sy vonona ny mandeha any aminao manaraka toerana halehany. Eto izahay mba hampahatsiahy anao haka azy miadana! One of our main tips on Ahoana no mijanona rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara nandritra ny ririnina Mamela fotoana fanampiny tonga amin'ny ny toerana halehany. nivezivezy afaka intsony mandritra ny ririnina noho ny fotoana hafa ao anatin'ny taona, indrindra raha sendra tafio-drivotra na ranomandry fepetra lalana. Ary mitondra fiara in inclement toetr'andro dia tsy ampy saina ny tsindry koa ny ho tara, izay mety lasa jamban'ny mitondra fiara soa aman-tsara ny fitsarana.
Roahy Safe ary mampihen Varimbariana fa Fotoana
Ahoana no mijanona rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara nandritra ny Winter #1 tendron'ny: Apetraka Ny finday! Ataovy ny finday atsahatra na mifandray ny fiara ny Bluetooth, ary tsy handray ny tananao na eny amin'ny kodia maso eny an-dalana mba hahitana fa WhatsApp hafatra.
Stay Safe rehefa nitondra fiara handeha Midika Henoy ny Road!
No, tsy mihaino ny ao am-ponao. Tsy amin'izao fotoana izao ihany. Henoy ny lalana. ara-bakiteny. Kodiarana manao feo samy hafa, rehefa mitondra fiara ny oram-panala sy ny ranomandry, izay no antony iray hafa foana ny onjam-peo boky ho isan'ny fiara ririnina fiarovana. Oram-panala lalana tokony ho somary tabataba mafy satria ny oram-panala dia daka. Raha mijanona feo mafy tampoka, mety efa nifindra avy ny oram-panala amin'ny ranomandry. Mijanona miala ao amin'ny feo ny pne teny an-dalana ho any foana ny lalana toe-piainana ambony izay matetika miova haingana, indrindra fa mandritra na taorian'ny oram-baratra.
Ahoana no Stay Safe rehefa nitondra fiara handeha Nandritra Winter? Ataovy azo antoka ny wiper Misy tsiranoka anti-Hivaingana, toy izany koa ny price tsy mivaingana ny amin'ny hatsiaka. Diniho mividy ririnina wiper lelany, izay manakana ny ranomandry sy lanezy avy manamafy ny wiper!
I nanaraka ny toro-hevitra sy mbola natao nifikitra
Indraindray, ireo zavatra ireo ho ialana cant. Raha hatao niraikitra tao amin'ny oram-panala eto ny sasany toro-hevitra haingana:
Mijanòna amin'ny fiara: Ny fiara dia manome fialofana vonjimaika, ary mandatsaka ny mora kokoa ho an'ny mpamonjy voina ny toerana anao. Aza mitady handeha amin'ny tafio-drivotra mafy. Mora ny hanadino ny fiara eo amin'ny fitsofana ny oram-panala, ary ho very.
Aza overexert ny tenanao: Rehefa nandavaka avy ny fiara, mihaino ny vatanao sy ny mijanona raha toa ka ho reraka.
ho hita: Afatory lamba antenain'ny fiaranao ny lamba miloko mamirapiratra, na apetraho eo an-tampon'ny varavarankely mihorona ny lamba mba hanehoana alahelo. Amin'ny alina, hitandrina ny dome mazava amin'ny raha azo atao. Tsy mampiasa afa-tsy kely ny jiro sy Ho mora kokoa ho an'ny mpamonjy voina mba hahita anareo.
Karakarao ny Exhaust Sodina: Ataovy azo antoka ny setroka sodina dia tsy tsentsin'ny oram-panala, ranomandry, na fotaka. A voasakana setroka sodina mety mahafaty gazy mandatsa-dranomaso ny mandefa any amin'ny mpandeha Indrindra amin'ny fiara raha mbola ny maotera no mihazakazaka.
Stay mafana: Ampiasao tsy ampy na inona na inona ny mifindra ny vatanao avy amin'ny hatsiaka. Mety tafiditra tany mats, gazety, na sarintany taratasy. Pre-entana bodofotsy sy ny akanjo mavesatra hampiasa in raha misy zavatra maika.
hitahiry Fuel: Raha azo atao, mihazakazaka ihany ny maotera sy ny heater ela ampy mba hanala ny vatany. Izany dia manampy amin'ny fitazonana solika.
Car Travel? Tsy miraharaha ny zava-drehetra isika, hoy fotsiny
Ahoana raha nisy fomba tsy mety voalaza eo ambony rehetra manahirana ny hitoetra rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara? Raha mba nisy fomba fitaterana izay afaka nitsambikina teo, ary mahazo ny toerana halehany sy haingana handeha soa aman-tsara. Oh miandry, misy! Izany dia midika hoe antsoina hoe fiaran-dalamby!
Marina fa fiara manolotra ny fahalalahana fa vitsy hafa fomba ny FITANTERANA manao. Afaka mandeha eny takatra raha tsy izany lalana amoron-tsiraka, loha tsy mahazo manao mitokana tanàna, ary tsy manahy ny fandaharam-potoana na ny toerana mivarotra avy. Tsy ry zareo tsy misy ny fahadisoana, na izany aza. Jereo ny antony maro ambony!
Fiarandalamby dia azo antoka kokoa sy haingana kokoa! Noho izany tsy mila hijanona rehefa nitondra fiara handeha soa aman-tsara raha toa Anao Hitaiza Travel, Lamasinina kokoa ihany koa ny takatry ny, indrindra raha mampiasa ianao Save A Train au livre ny saran-dalana. Mila mandresy lahatra kokoa? Isika dia nanoratra bilaogy rehetra ao amin'ny nahoana fiaran-dalamby lavitra no ambony noho ny lalana travel.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)